2012-04-08 ~ Myanmar Express
မြန်မာ့ရိုးရာ NLD ဒီမိုကရေစီ သင်္ကြန် (၂)
မြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ Cyber warefareစတင်ဖြစ်ပွားနေပါပြီ
by Min Ye Kyaw Swarမြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်မှအငြင်းပွားမှုမှစတင်ကာမြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ Cyber warefareစတင်ဖြစ်ပွားနေပါပြီ မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်မှအငြင်းပွားမှုမှ စတင်ကာ မြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ Cyber warefare စတင်ဖြစ်ပွားနေပါပြီ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Myanmar Developer များ , Myanmar Hosting Site များ , Myanmar Webadmin များကို တိုက်တွန်းလိုတာက မိမိတို့ site ရဲ့ Security ကို အမြင့်ဆုံး ထားဖို့ကို တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်... မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ရှိတဲ့ hacking လောကကနှုတ်ထွက်သွားကြတဲ့ အနားယူသွားကြတဲ့ မြန်မာပညာရှင်အပေါင်းကိုလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ။ မြန်မာပြည် အရေး ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူတကွပူးပေါင်း ပါဝင်ဆင်နွှဲကြလိမ့်မည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်.... မြန်မာအချင်းချင်း အသိပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ Myanmar Express
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အရွယ်အစားကြီးမားသည့် ဂြိုဟ်တုများ လွှတ်တင်သွားမည်
From : MRTV-4 မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ နောင်လာမယ့် အနာဂတ်မှာ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုတွေ အပါအ၀င် နောက်ထပ် အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ ဂြိုဟ်တုတွေ လွှတ်တင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို မြောက်ကိုရီးယား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဒုံးပျံလွှတ်တင်ကွင်းကို လေ့လာဖို့ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ စာနယ်ဇင်း သမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံဟာ အခုဧပြီလလယ်ပိုင်းမှာ ဂြိုဟ်တုတစ်ခု တင်ဆောင်ထားတဲ့ ဒုံးပျံတစ်ခုလွှတ်တင်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး အဲဒီဒုံးပျံ လွှတ်တင်မှုကို လာရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာဖို့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ပညာရှင်တွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအမ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်းလဲ အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ နောင်တချိန်မှာလွှတ် တင်သွားမယ့် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်မှုတွေကို နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ လွှတ်တင်ရေး ကွင်းဟောင်း Musudan-ri ကနေလည်း လွှတ်တင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ Musudan-ri လွှတ်တင်ရေးကွင်းဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်းက ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်တွေ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ရာမှာလည်း အသုံးပြုခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Reference : NHK.com Myanmar Express
မီဒီယာသမားများ မဖော်ပြလိုသော အမှန်တရားများ
by Khin Nyein Chan မဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Weekly Eleven မှာ comment ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်…. အဲဒါကို လင်းသိုက်ညွန့်က ဒီလိုပြန်ရှင်းပြထားပါတယ် (Lin Thaik Nyunt ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရမဲစာရွက်ကိုပြန်လဲပေးဖို့ တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်)ကြုံကြိုက်လို့ ကော်မရှင်မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိတဲ့အခါ ဒီအကြောင်းပြောဖြစ်တော့ သူပြောပြတာကို share လိုက်ပါတယ်….- မဲပေးတဲ့စာရွက် စုတ်ပြဲလို့ ၊ ပျက်စီးလို့ ပယ်မဲအဖြစ်မခံရအောင် မဲရုံမှူးက မဲစာရွက်ကို လဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ အဲဒါမှသာ လဲပေးနိုင်မယ်၊ မဲရုံမှူးတွေကို အရန်မဲအနည်းငယ်ပေးထားတာရှိပါတယ်၊ မဲဆန္ဒရှင်က မှားခြစ်မိလို့ အသစ်လဲပေးခိုင်းရင်တော့ မဲရုံမှူးက လဲပေးလို့မရပါ၊ သူ့တာဝန်အရ လုပ်ဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။- မဲမပေးပါနဲ့ (သို့) မဲလာပေးပါ (သို့) မဲသွားပေးပါဟု (အတင်းအကျပ်) မည်သူကမှ ပြောခွင့်မရှိပါ၊ ပြည်သူတစ်ဦးချင်းဟာ ကိုယ့်အခွင့်အရေးအရ မဲပေးချင်ပေးနိုင်တယ်၊ မပေးချင် မပေးဘဲနေနိုင်ပါတယ်၊ သူ့အခွင့်အရေးပါ။ မဲပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၉) က မတ် (၂၄) အထိ (၁) မဲရုံ ၊ (၂) ရပ်ကွက်ရုံး ၊ (၃) မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးတွေမှာ ကပ်ထားတဲ့ မဲရုံစာရင်းနဲ့ မဲစာရင်းကို သွားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်၊ ဒါက မဲဆန္ဒရှင်ရဲ့တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်၊ မဲဆန္ဒရှင်ဟာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ်၊ မဲစာရင်းမှာ နာမည်မပါရင် ရပ်ကွက်ကော်မရှင်မှာ သွားပြောနိုင်တယ်၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုလည်း ပြောနိုင်တယ်၊ ဥပမာ - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ အဲလိုပြောလို့ ဖြည့်ပေးတာ ၃ သောင်းခွဲကျော် ရှိခဲ့တယ်။- မဲစာရင်းမပါလို့ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးပါတယ်ပြောတဲ့သူအများစုဟာ ကိုယ့်မဲစာရင်း ကိုယ်သွားမကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ အရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲစာရင်းကြည့်ပြီး ကိုယ့်နာမည်ပါ-မပါပြောခွင့်ကို (၁) ပတ်ပဲ ပေးခဲ့တာကနေ အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၃) ပတ်အထိတိုးပေးထားတာဖြစ်တယ်။ - လ - ၀ - က မှာ သေစာရင်းမ၀င်လို့ မဲစာရင်းမှာ သေတဲ့လူနာမည်ပါနေတာမျိုးရှိတယ်၊ ရပ်ကွက် (သို့) မြို့နယ်ကော်မရှင်ကို သွားပြောနိုင်တယ်၊ အသိပေးလို့ရအောင် ပြင်လို့ရအောင် အချိန်ကို (၃) ပတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ မဲစာရင်းဆိုတာ draft ပါ - မဲဆန္ဒရှင်က အဲဒါကိုစစ်ဆေး အတည်ပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါဟာ ပြည်သူ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်မကျေခဲ့ဘဲနဲ့ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကို ဘေးထိုင် ဘုပြောနေတာဟာ တကယ်တမ်းမှာ စိတ်ရင်းစေတနာ မရိုးသားကြတာ ဖြစ်ပါတယ် Myanmar Express
မြန်မာ့ရိုးရာ NLD ဒီမိုကရေစီ သင်္ကြန်
မြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ Cyber warefa...
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အရွယ်အစားကြီးမားသည့် ဂြို...
ရန်ကုန်မှာ ပြန့်နေတဲ့ KIA ဆန့်ကျင်ရေး ၀ါဒဖြန့်စာ
မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျား ဘာကွာလဲဆိုတော့
ဗြိ်တိန်ဝန်ကြီးချပ်ကင်မရွန်း သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ...
၂၀၁၂ သင်္ကြန် အကျနေ့ ဓာတ်ပုံများ
အမေရိကန်မ တို့ ပျော်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်
အမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေ သိရှိစေရန် (ပေးစာ - ၁၃၀)
၂၀၁၂ ရန်ကုန် သင်္ကြန် အကြိုနေ့ ဓာတ်ပုံများ
၂၀၁၂ ခုနှစ် မန္တလေး သင်္ကြန် အကြိုနေ့ ဓာတ်ပုံများ
သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း ရန်ကုန် မြို့တွင်းရှိ မြန်မာ့ စီး...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ၌ ဖယောင်း...
ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းတဲ့ မြန်မာတွေ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်လူပ်ခတ်ခဲ့သော ဆူနာမီငလျင် ...
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် လူပ်ခတ်ခဲ့သော ဆူနာမီ ငလျ...
အစိုးရသစ် ပထမဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ စံချိန်တင...
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် စ...
IT ကဏ္ဍအတွက် ၂၇ ထပ်ရှိ အဆင့်မြင့်တာဝါကြီးတစ်ခု MICT ...
ရန်ကုန်ရှိ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ်များတွင် သင်္ကြန်တွင်း မိုင်းအ...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်င...
ရန်ကုန်မြို့ လျှပ်စစ်မီးပိုပေးနိုင်ရန် တရုတ်နိုင်င...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ကန့်ကွက်လွှာ ၁၂၃ စောင်ကို ပြည်ထောင်...
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာသူချင်း အတ...
ဓါတ်သတ္တု လုပ်ငန်းများတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ရင်းန...
နှစ်ပေါင်း ၂၂ နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အေ...
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းအချို့အား တစ်လ...
ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံလာမည်
ရေပက်ခံကားများ နိုင်ငံတကာအလံများ တပ်ဆင်မောင်းနှင်ပ...
အမေရိကန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသစ် ပြန်စမည်
သင်္ကြန်ရေပက်ရာတွင် မီးသတ်ပိုက်များကို စစ်ဆေးအရေးယူသ...
ပြည်လုံးကျွတ် လူဦးရေ သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူမှု အ...
သင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း နယ်ပြန်မည့်သူများ ကားလက်မ...
ဗြိတိန်တွင် ရုရှား နိုင်ငံမှ နှုကလိယ ဓါတ်ပေါင်းဖို ...
Email များကို ခိုးဖတ်ခဲ့ကြောင်း Sky News ဝန်ခံ
ပြန်လည် တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ ဘီဘီစီ ရုပ်သံလိုင်း
သင်္ကြန်တွင်း အရေးပေါ် ကိစ္စရပ်များအတွက် မြန်မာ့လေကြော...
အင်တာနက်မှ ပြည်ပသို့ တရားဝင် ဖုန်းခေါ်ဆိုစနစ် ဈေးေ...
ရိုဟင်ဂျာများ သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင...
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်လူမျိုးပါလို့ စွပ်စွဲတဲ့ BBC...
ရိုဟင်ဂျာ တွေကို လက်မခံတဲ့ နိုင်ငံတွေ (ပေးစာ - ၁၂၉...
ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုတိယမြောက် ထောက်ပံ့ရေးယာဉ်တန်း ကေအိုင်အု...
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြီးများ ပြည့်သူ့အကျိုးပြုတာ မပြိုင်ကြပဲ စီးပွားရေး ပြိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Eleven Media ဖော်ပြ
* စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြီးများ ပြည့်သူ့အကျိုးပြုတာ မပြိုင်ကြပဲ စီးပွားရေး ပြိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ အသီးသီးမှ အယ်ဒီတာများက ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
Harvard တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှု အကြံပြုချက်အရ ဆလတ်ရွက် နေ့စဉ်စားသူတွေဟာ အူမကြီး ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျ စေတယ်လို့ ဆိုလ...
အသုံးချ ခံဖို့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကတော့ အများကြီးမှ အများကြီးပါပဲ။ အရင်တုန်းက နိုင်ငံရေး၊ အခု ၉၆၉ ပေါ့ ဟု ဖြေဆိုခဲ့တာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ညီမကို အသုံးချမယ့်သူတွေ...
နန်းခင်ဇေယျာ အင်တာဗျူး၊ နန်းခင်ဇေယျာ၏ ရှင်းလင်းချက်နှင့် ဂျာနယ်၏ တုန့်ပြန်မှု
ဂျာနယ် အင်တာဗျူးတစ်ခုက အပြောအဆို တစ်ခုကြောင့် ၉၆၉ အပေါ် အမြင်တစ်မျိုး ဖြစ်လာပါ...